Jakoba 4 - Ny Baiboly
Jakoba toko 4
Ny fototry ny ady - Ny fanoherana ny ratsy rehetra - Ny tsy fitsarana ny namana - Ny tsy hireharehana foana.
1Avy aiza ny ady amam-pifandirana ao aminareo? Moa tsy avy amin'ny filan-dratsinareo izay miady ao anatin'ny nofonareo va? 2Mitsiriritra hianareo, nefa tsy mahazo; mamono sy mialona hianareo, nefa tsy mety manana; mifanditra sy miady hianareo; ary hianareo no tsy mahazo, dia satria tsy mangataka hianareo; 3mangataka hianareo, fa ratsy fangataka, dia ny hahazo izay hiaranan'ny filan-dratsinareo, ka tsy mahazo hianareo.
4Ry mpisintaka mijangajanga ô, tsy fantatrareo va fa fankahalana an'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza na iza te-ho sakaizan'izao tontolo izao, dia milatsaka ho fahavalon'Andriamanitra. 5Ary moa ataonareo ho teny foana va ny lazain'ny Soratra Masina hoe: Tia anareo sy saro-piaro anareo aza ny Fanahy izay nampitoeriny ao anatinareo? 6Lehibe toy izany koa anefa ny fahasoavana omeny, araka ny lazain'ny Soratra Masina hoe: Manohitra ny mpiavonavona Andriamanitra, fa manome fahasoavana ny manetry tena. 7Koa maneke an'Andriamanitra hianareo, ary manohera ny demony, dia handositra anareo izy. 8Manatòna an'Andriamanitra, dia hanatona anareo izy. Diovy ny tànanareo, ry mpanota; ary ataovy mangarangarana ny fonareo, ry mpiroa saina. 9Fantaro ny fahorianareo, ka manaova fisaonana, dia mitomania. Aoka hanjary ranomaso ny hehinareo, ary hody alahelo ny hafalianareo. 10Manetre tena eo anatrehan'Andriamanitra, dia hanandratra anareo izy.
Ary inty ny aminareo izay manao hoe: Hankany ananona izahay, anio na rahampitso, dia hitoetra any herin-taona, ka hivarotra sy hahazo tombom-barotra: 14kanefa tsy mahalala izay ho ampitso akory hianareo; 15fa inona moa ny ainareo? - Zavona kely miseho vetivety, dia levona indray. Koa izao no tokony hatao: Raha sitra-pon'Andriamanitra, ka velona ny aina, dia hanao izao, na izany izahay. 16Fa izao dia mirehareha amin'ny fahasahianareo hianareo; ka ratsy ny fireharehana rehetra toy izany. 17Ary izay efa mahalala ny mety hatao nefa tsy manao, dia meloka. >